Indlela yophuhliso - Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd.
Ngokwemigangatho ye-ISO9000 kunye ne-ISO13485, kusekwa amashishini anendawo yokuqala kunye neenkcukacha eziphezulu.
Kwimveliso efanayo e-China, sidlulisile inkqubo yolawulo lomgangatho kunye nokuqinisekiswa kwe-CE ye-TUV eJamani.
Kungowokuqala kwiphondo ukupasa isiqinisekiso se-CMD sasekhaya kunye nokufumana iziqinisekiso zobhaliso lweemveliso ezisi-8.
IPhondo le Jiangxi eliwongwa laqhubela phambili ngamashishini abucala.
Isirinji yokuzikhusela ekhuselekileyo njalo njalo ufumane i-US fda510 (k) imvume yokuthengisa.
Kuzinze ngokusesikweni kwindawo yeNanchang Xiaolan yesizwe kunye nezoPhuhliso lweTekhnoloji.
Iimveliso zothotho lwe-Yixin zithathwa njengeemveliso ezaziwayo zeJiangxi.
Iprojekthi yobuchwephesha yenkampani yakhethwa kwiprojekthi yeSizwe yeTotshi.
Iye yamkelwa njengeshishini lesizwe eliphezulu-lobugcisa, kwaye iimveliso zalo ezintsha zikhethwe kwiimveliso eziphambili eziphambili zikazwelonke.
Uphawu lwentengiso "Yixin" lwaziwa njengegama elaziwayo e China.
Uhlengahlengiso oluyimpumelelo, ukusekwa ngokusesikweni kwenkampani edibeneyo yesitokhwe.
Yanikwa ibhetshi yokuqala yamashishini amatsha kwiPhondo leJiangxi.
Yachongwa njengebhetshi yokuqala yamashishini amatsha kwiPhondo laseJiangxi. Isebe iqela Sanxin zonyango iye yaphuculwa isebe Party ngokubanzi.
Inikwe njengeshishini lokuthumela ngaphandle eliphambili kwiPhondo laseJiangxi.
Inkampani yaseta indawo yokusebenza yezixhobo.Shenzhen Stock Exchange yadweliswa ngempumelelo kwi-gem.
Inikwe iwonga kwishishini elilingelokuboniswa kwempahla elingumlingisi kwiPhondo laseJiangxi.
Umsitho wokumiselwa kweSanxin, iYunnan.
I-Sichuan Weisheng yasekwa kwindawo yoPhuhliso lwezoqoqosho eMeishan. Ngo-2018, yafikelela kwintsebenziswano ne-Chengdu Weisheng, ikufumanisa ukuqhubela phambili kophuhliso lweshishini liphela ukusuka kwimpahla esetyenziselwa ukusetyenziswa kwedialysis ukuya kwizixhobo zedialysis.
Sikunye noNingbo Ferrar, sangena kwicandelo lotyando lwe-cardiothoracic, kwaye senza inyathelo eliphambili kulwakhiwo olwahlukeneyo lonyango kunye nemveliso yezempilo. Umsitho wokumiselwa kwe-xinpinxi kwiPhondo le-Heilongjiang.
Sichuan Weisheng dialysis isiseko iimveliso imveliso uthotho waqala ukubeka isiseko.
Iyeza elineengcambu [1997- 2005]
Iyeza elineengcambu [2006- 2010]
Iyeza elineengcambu [2011- 2015]
Iyeza elineengcambu [2016- 2020]